कस्त छ तपाईकोे यो हप्ता ? हेरौं भदौ पहिलो साताको राशीफल | mulkhabar.com
कस्त छ तपाईकोे यो हप्ता ? हेरौं भदौ पहिलो साताको राशीफल
August 17, 2018 | 9:20 am 188 Hits
हुन त कर्म गरेपछि त्यसै अअनुसारको फल पाइन्छ भनीन्छ तर पनि आफ्नो भाग्यमा भएन भने कर्म जति गरेपवनि परिणाम हात लाग्दैन भनेर बुढापाकाले भनीरहन्छन् र हुन्छ पनि त्यस्तै । त्यसैले के छ आफ्नो राशीफलको अवस्था थाहा पाउँदा राम्रै होला ।
भदौ पहिलो हप्ताको राशीफल पढौं ।
ठूलो लगानी गरी व्यवसाय प्रारम्भ गर्दा विदेश यात्राको मौकासमेत जुर्नेछ । मनोरञ्जक क्रियाकलापमा सहभागी हँुदा विवेक पुर्‍याउनुहोला । कार्य सञ्चालनमा आइलागेका बाधाहरू फुकुवा हुनेछन् । सरोकार नभएको कामले फजुल खर्च बढाउनेछ । भौतिक सुविधाका साधन खरिद गर्ने अवसर जुट्नेछ ।
कीर्तिमानी कार्य गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडी देखिएला, सावधानी अपनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । मंगलबार तथा गुरुबार महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुहोला । सवारी साधन चलाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । विदेशी पाहुनाहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ । आकस्मिक यात्रामा आर्थिक लाभसमेत हुने सम्भावना छ ।
नयाँ स्थानको भ्रमण हुनसक्छ । प्रियजनसँगको भेटघाटमा दिनचर्या रमाइलोसँग बित्नेछ । साथीहरूले दिएका सुझावप्रति बेवास्ता गर्नाले आफ्नो कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्छ । नयाँ एवं पुराना कामको प्रतिफलले अन्य योजना बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।
सामूहिक लगानीमा नयाँ काम प्रारम्भ हुनसक्छ । गुणस्तरीय व्यवसाय सुरुवात गर्न साझेदारीहरूबीच मत मिल्नेछ । सघाउन आउने सहयोगीले षड्यन्त्र गर्न सक्छन्, सचेतना अपनाउनुहोला । विपक्षीले स–साना कमजोरी औंल्याउँदा परिणाम आफ्नै पक्षमा आउनेछ ।
भित्रभित्रै चियोचर्चा गर्नेहरूसँग सावधानी अपनाउनु नै बेस हुन्छ । मौसमी फेरबदलबाट आइलाग्ने पारिवारिक अस्वस्थतामा समय खर्चिनुपर्ला । बोलीमा थप प्रभाव पार्न रातो रंगको प्रयोग लाभदायक सावित हुनसक्छ । यात्रामा खराब आचरण भएकाहरूबाट टाढै रहनुहोला । प्रतिष्ठा जोगाउने काममा सचेत रहनुमै भलो छ ।
सम्झनलायक कार्य सम्पन्न गर्दा ठूलाबडा व्यक्तिको सहयोग तथा आशीर्वादको आवश्यकता पर्नेछ । करियर बनाउन दैनिकीमा परिवर्तनको खाँचो छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको भेटले नयाँरपुराना कार्य सम्पन्न गर्न जुक्ति–बुद्धि प्रदान गर्नेछ । आफ्नो सामाजिक हैसियतको हेक्का राख्नुहोला । विलासीपनलाई प्रोत्साहित नगर्नु नै बेस हुन्छ ।
बलमिच्याइँ गरे काम बिग्रने सम्भावना छ । मन पराउनेहरूले दिएको सुझाव अनुसरण गर्दा समय बचत हुन सक्छ । आकर्षक सवारी साधनको खरिदले अरूको मन लोभ्याउनेछ । भ्रमण गर्दा खर्च बढी भै व्यवहारिक झमेला आइलाग्न सक्छ । साताको अन्त्यमा स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्‍याउनुहोला ।
अभिभावकको सुझावअनुसार कार्य गर्दा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । विवेक नपुर्‍याई गरिएका कार्यले हानि–नोक्सानी गर्न सक्छ । बाहिरी कुराले तपाईंप्रति परिवारका सदस्यहरूको गुनासो बढ्न सक्छ । जिम्मेवार भै व्यवहार गर्नुहोला । आम्दानी हुने विविध व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
सहयोगीहरूको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा फाइदा नै हुनेछ । अर्काको बढी विश्वास गर्दा गोप्य सूचना बाहिरिएर समस्या सिर्जना हुनसक्छ । परिवार तथा नजिकका नातेदारले आफ्ना भनाइ नसच्याउँदा तिक्तता बढ्न सक्छ । नम्र भएर संयमित व्यवहार गरे सबैले तपाईंको विचारको समर्थन नै गर्नेछन् ।
दैनिक कार्यहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्, त्यसमा तदारूकताको आवश्यकता छ । परिस्थितिअनुरूप अघि बढ्नुहोला । इच्छाएको जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि त्यसमा थप मेहनतको खाँचो पर्नेछ । विपक्षीहरूले आफ्ना त्रुटि औंल्याउन सक्छन् । आफ्ना कमजोरीलाई सकारात्मक रूपमा आत्मसात् गर्न सक्दा उचाइमा पुगिनेछ ।
नयाँ रोजगारी हात पार्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अवसरलाई चुनौतीका रूपमा शिरोधार्य गरी प्राप्त मौका नगुमाउनुहोला । सोचविचार नगरी अरूलाई वचन दिँदा प्रतिकूल परिस्थिति आइलाग्न सक्छ । नीलो रंग प्रयोग गर्न सके चुनौती सामना गर्न सहज हुनेछ ।
घरेलु कार्यमा अलमलिँदा महत्वपूर्ण काम ओझेलमा पर्न सक्छ । उत्तेजित भै अनुभव नभएको व्यवसायमा हात हाले नोक्सान होला । कर्मचारी वर्गका निम्ति स्थान परिवर्तन वा नयाँ अन्य अवसर प्राप्त हुने सम्भावना छ । साताको अन्त्यमा परिस्थिति रमाइलो भए पनि भविष्यको चिन्ताले सताउन सक्छ । – कान्तिपुरबाट